नेकपा सचिवालय बैठक साँझ साढे पाँच बजे, चासाेकाे रुपमा हेरिएकाे बैठकमा के निर्णय हाेला ? – Ktm Dainik
नेकपा सचिवालय बैठक साँझ साढे पाँच बजे, चासाेकाे रुपमा हेरिएकाे बैठकमा के निर्णय हाेला ? - जे देख्छ, त्यही लेख्छ
नेकपा सचिवालय बैठक साँझ साढे पाँच बजे, चासाेकाे रुपमा हेरिएकाे बैठकमा के निर्णय हाेला ?
काठमाडौं : उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई भावी प्रधानमन्त्री बनाउने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको प्रस्तावमाथि ठोस छलफल गर्न नेकपा सचिवालयको बैठक शनिबार बस्दैछ। अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र वरिष्ठ नेता माधव नेपालले गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने आफ्नो प्रस्ताव कार्यान्वयनको योजना शनिबारको बैठकमा प्रस्तुत गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुझाव दिएका छन्।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको: शनिवार, वैशाख २० २०७७ १६:२६:२७